WASIIRKA QORSHAYNTA S/L CALI SANYARE OO SHIR LA YEESHAY HAYADAHA CALIMAGA AH | Toggaherer's Weblog
Wasiirka Qorshaynta Qaranka, Md. Cali Maxamed Ibraahin (Cali Sanyare) ayaa Somalilandpress xog-waran ka siiyay kulan balaadhan oo uu Gudoominayay, kaasoo ay kala soo qayb-galeen Wasiirka Arrimaha Gudaha, Wasiirka Macdanka iyo Biyaha iyo Hay’adaha Caalamiga iyo kuwa Wadaniga ah ee xukuumada la shaqeeya.
Kulankan oo ku qabsoomay Hoolka shirarka ee Wasaaradaha Arrimaha Gudaha, oo socday muddo 4 Saacadood ah, waxa ay labada gebo-gabadiisii aanu wax ka waydiinay Wasiirka Qorshaynta, waxaana xogwaraysigaasi u dhacay sidan: –
S:Md. Wasiir waxaad maanta kulanteen idinka oo Wasiiro xukuumada ka tirsan ah iyo dhinaca kale oo Hay’adaha Caalamiga ah ee wadanka ka hawl-galo oo ay wehelinayeen kuwa wadanig ah, muxuu ahaa nuxurka kulankaasi?
J: Waxa weeye, waxaanu ka wada hadalay oo aanu maalmahanba ka wada hadlaynay sidii dadka ku tabaaloobay abaaraha wax loogu qaban lahaa. Waxa jirtay in Saddexda gobol ee Bariga ay iminka u socdaan biyo-dhaamis loo sameeyay, oo aan doonayno in iyana wixii u baahan taageero sidaas oo kale ah gobolada kalena in la sameeyo, in hadana laga wada-hadlo xaalada caafimaadka ee xoolaha meelahaas ay abaaruhu ka jiraan, xaalada caafimaadka ee dadka iyo in laga wada hadlo wixii taageero ah ee loo gaysan karo eek u saabsan xagga cuntada, waxaas oo dhan oo u baahan in laysla qiimeeyo, oo markaas lagu dhaqaaqo.
Hada ilaa xalay roobab baa ka da’ay gobollada oo dhan, taas lafteedana in meelaha roobabku ka da’aan aanu ogaano oo aanu warka siino qolooyinkan aanu wada shaqayno ee Hay’adaha ka socda, markaa shirkani wuu noo soconayaa todobaadkan oo dhan, si meelihii taageero u baahan oo dhan wax loo gaadhsiiyo dhinac walba, oo wax laga qabto dadka aabaarahan ku habsaday dhibaatooyinka ay u keeneen arrimahaas ayaanu ka wada hadlaynay, Axadda soo socotana waanu balansanahay oo waanu kulmaynaa, hawsha biyo-dhaamiska ee laga waday Barigana warbixin wanaagsan baanu ka helay, yaanay joogsanina waanu nidhi.
S: Waxa dhacda marka wadanka abaaro ka dhacaan ee uu biyo-dhaamiskan oo kale galo, oo ay roobabkuna sidan oo kale da’aan in la joojiyo biyo-dhaamiskii iyo taakulayntii dadka abaaruhu dishoodeen iyada oo aan roob badaniba di’in, isla-markaana aad ka warqabto inay wakhti qaadanayo inuu doogu soo baxo, baraaguhuna biyoobaan, markaa hakad ma galayaa biyo-dhaamiskii aad wadeen?
J: May, waxaanu nidhi yaanay hakad gelin, waayo waxa dhacaya roobkii meel ku da’ay dhul ay abaari in badan haysay dee wakhti buu qaadanayaa sidii uu wax u soo saari lahaa, mida kale biyihii laftoodiiba saaniba hoos uma gelin dhulkii, markaa wixii socday ee biyo dhaamis ahi yaanay joogsanin baanu nidhi. Laakiin waa inaan ogaano meelaha ay wax ka da’een, si aan meelihii laga soo guuray biyo khalad ah loo gayn baa laga shaqaynayaa. Laakiin, ma joogsanayso, ilaa ay roobab wanaagsani da’aan waa lagu wadayaa wixii taageero la siinayay meelahaas oo dhan.
S: Dhinaca abaaraha intaad ka warqabtaan meelaheebaa ugu daran?
J: Xaalada abaaraha waa la kala sii daraa, laakiin gobollada bari ayaa ugu darnaa, iminka roobabkan la sheegayaa inay wax ka yara bedelaan baa laga yaaba, qiimayn cusub baa lagu jiraa oo la qiimaynayaa xaaladu kolba siday tahay in lala socdo ah, si aan khalad loo gelin, waayo meel aad abaar ku ogayd haday barwaaqo noqoto, oo biyihii dadkii dhaansadaan, oo xoolihii iska hagaagaan, oo adna aad u haysatid uun inay abaar tahay dee updated ma tihid. Markaa qiimayn baa la yidhi ha lagu sameeyo wararka oo dhan xaga xukuumada.
S: Wasiir ilaa iminka wadanka meelaha ay roobabku heleen maxaad nooga sheegi kartaa?
J: Wasiirka Arrimaha Guduhu wuxuu noo sheegay in Xalayto roobabku ka da’een gobollada oo dhan 80%, laakiin sida roobku u biyo-dhigay iyo waxaas oo dhan waa in lala socdo.
S: Waxa jirtay in raashin Saddex Gaadhi sideen oo u rarnaa Hay’ada WFP lagu boobay Tuulada Yufle oo ka tirsan Deegaanka Ceerigaabo, iyada oo dadka deegaankaas boobay ay haysatay abaar ba’an iyo baahi xad-dhaaf ah, markaa ma la soo qaadeen in aanay raashin caawimo ah Hay’aduhu dhaafin dhul lagu tabaalaysan yahay oo xaaladiisu liidato?
J: Horta waa in la ogaado raashinadaa meelaha gaarka ah loogu talo-galay siday ku yimaadeen. Waxa weeye dhul baa jira baad iyo biyo-ba ka go’een mar hore aad u tabaalaysnaa oo ka xumaa inta kale markaa meelahaasaa ay tagayeen oo loo qorsheeyay. Laakiin intii ay abaartu ay daba-dheeraatay ayaa meelihii kalena ay la mid noqdeen, markaa waa qorshaha aanu ka hadlayno Axadda, ee lagaga hadlayo si ay u dhici lahayd meeshii tabaalaysanba in raashin uu gaadho. Waayo haduu dadku isku wada mid noqdo, meeshii xumayd ee aad ogayd meelihii kale la mid noqdaan, waxa weeye dabcan in sidaa loo eego oo aan qolona la dhaafin. Laakiin beryihii hore iyaga oo iska hagaagsan ayaa kuwa tabaalaysan marka cunto loo geeyo ay is-cawryi jireen oo ay odhan jireen annagana maxaa naloo siin waayay. waxaanu odhan jiray waar bal u kaadiyoo kuwaasaa idinka liitee, kuwaa ha u tagto. Laakiin iminka hadii isku wada mid la noqday, waa qorshaha aanu doonayno in Axada ka wada hadalo si aan loo dhaafin dadka tabaalaysan ee loo wada gaadhsiiyo cuntada.